NJEHIE 1406 MGBE Ị NA-ETINYE AUTOCAD - AUTOCAD - 2019
Esi edozi njehie 1406 mgbe ị na-etinye AutoCAD
Ntinye nke programmụ AutoCAD nwere ike ịkwụsị site na njehie 1406, nke na-egosiputa windo nke na-ekwu "enweghị ike ide akara klas na Software Classes CLSID key ... Lelee na ị nwere ikikere zuru oke maka igodo a" n'oge nrụnye.
N'isiokwu a anyị ga-agbalị ịchọta azịza ya, otu esi emeri nsogbu a ma mezue nwụnye nke AutoCAD.
Njehie kachasị njọ 1406 bụ eziokwu na e mechiri usoro mmemme site na antivirus gị. Gbanyụọ software nchedo na komputa gị ma malite nrụnye ọzọ.
Idozi Mmezi Nzọụkwụ AutoCAD: Error Fatal na AutoCAD
Ọ bụrụ na ihe ahụ edere n'elu adịghị arụ ọrụ, mee ihe ndị a:
1. Pịa "Malite" na ntinye iwu tinye "msconfig" ma malite window windo nhazi.
Ihe a na-eme naanị site n'aka onye nchịkwa.
2. Gaa na taabụ "Mmalite" wee pịa bọtịnụ "Gbanyụọ niile".
3. Na Ọrụ taabụ, wee pịa bọtịnụ Gbanyụọ.
4. Pịa "OK" wee malitegharịa kọmputa ahụ.
5. Malite usoro mmemme ahụ. A ga-eme ka echichi "dị ọcha" rụọ ọrụ, mgbe nke a gachara, ọ ga-adị mkpa ịgụnye ihe niile mepụtara na § 2 na nke 3.
6. Mgbe nchịkọta ọzọ, malite AutoCAD.
Nkụzi AutoCAD: Otu esi eji AutoCAD
Anyị nwere olileanya na onye ndu a nyere aka dozie nsogbu 1406 mgbe ị na-etinye AutoCAD na kọmputa gị.